सजिलै र नि: शुल्क तपाइँको कम्प्युटरमा एन्ड्रोइड ११ कसरी जाँच गर्ने Androidsis
नेरीआ परेरा | | ट्यूटोरियलहरू
Android 11 यो वास्तवमै राम्रो देखिन्छ। हो, गुगलको अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करण पूर्ण फेसलिफ्टको साथ आउँछ, नयाँ इमोजी सहित अन्य उपन्यासहरू बीच। समस्या के हो भने, तपाईको फोन अपडेट हुन धेरै समय लाग्नेछ।
तपाई चाहानुहुन्छ एन्ड्रोइड ११ जाँच गर्नुहोस् तर के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँको स्मार्टफोनले यसलाई प्राप्त गर्न समय लिनेछ? हामी तपाइँलाई तपाइँको डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटरमा गुगल अपरेटि system प्रणालीको मजा लिनको लागि सब भन्दा राम्रो समाधान देखाउँदै छौं।
एन्ड्रोइड स्टुडियो, तपाइँको कम्प्युटरमा एन्ड्रोइड ११ लिनको लागि उत्तम तरिका
यो जहाँ म भित्र आउँछु एन्ड्रोइड स्टुडियो, एक नि: शुल्क प्रोग्राम जसले तपाईंलाई गुगलको अपरेटिंग प्रणालीको नयाँ संस्करणको साथ आउने सबै समाचारहरू परीक्षण गर्न भर्चुअल मोबाइल सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। याद गर्नुहोस् कि वर्तमानमा पिक्सेल र केहि अन्य मोडेलहरू Android ११ का साथ उपयुक्त छन्, त्यसैले यदि तपाईं यस संस्करणलाई प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, यसलाई राम्रोसँग इमुलेटेड फोनमा प्रयास गर्नुहोस्।
भन्नुहोस् कि एन्ड्रोइड स्टुडियोको यसको जटिलता छ, तर यी चरणहरू पालना गरेर तपाईं आफ्नो पीसीमा एन्ड्रोइड ११ पाउनुहुनेछ धेरै साधारण तरीकाले। तपाईं एक स्मार्टवाच अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो एन्ड्रोइड स्टुडियो को सबै भन्दा उपयुक्त संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईको कम्प्युटर को लागी। अब, तपाईको पीसी वा ल्यापटपमा प्रोग्राम स्थापना गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईको एन्ड्रोइड स्टुडियो स्थापना भएपछि, प्रोग्राम खोल्नुहोस् र ure कन्फिगर »छनौट गर्नुहोस्« AVD प्रबन्धक »। अब, इमुलेटेड उपकरण सिर्जना गर्न सुरू गर्न "नयाँ भर्चुअल उपकरण सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं एक्जिक्युट हुन हार्डवेयर चयन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, मोबाइल फोन को एक विस्तृत विविधताबाट छनौट गर्न सक्षम हुँदै।
अब, तपाईले अनुकरण गर्न चाहानु भएको एन्ड्रोइडको संस्करण छनौट गर्न, तपाईले निम्न मार्क गर्नु पर्छ: "R" एपीआई स्तर with० को साथ, जुन एन्ड्रोइड ११ बिटा हो। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको "डाउनलोड" मा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड र स्थापना प्रक्रिया समाप्त हुनका लागि कुर्नुहोस्। कहिलेकाँही केहि चीज अलि लामो हुन्छ, धैर्य गर्नुहोस्।
एकचोटि «R» डाउनलोड भएपछि (जुन एन्ड्रोइड ११ बीटा हो) क्लिक गर्नुहोस् «Next» ताकि तपाई देख्नुहुनेछ कि मेनू सबै अनुकरण गरिएको र कन्फिगर गरिएको उपकरणहरूको साथ देखा पर्दछ। तपाईंले भर्खरै उपकरण डबल-चक्र गर्नुपर्नेछ र यो एन्ड्रोइड ११ बिटाबाट सुरू हुनेछ। यो वास्तवमै सजिलो छ! D
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » बढी पर्खनुहोस्! त्यसोभए तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा एन्ड्रोइड ११ परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ